Fangatahan’ny CENI :: Hiankina amin’ny Fitsarana ny hisian’ny fanamarinana lisi-pifidianana • AoRaha
Fangatahan’ny CENI Hiankina amin’ny Fitsarana ny hisian’ny fanamarinana lisi-pifidianana
Ankamantatra ny hisian’ny fanatsarana ny lisitry ny mpifidy mialoha ny hirosoana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna sy mpanolotsainan’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao. Taorian’ny fanakianana isan-karazany tamin’ireo fifidianana nifanesy dia fantatra fa hangataka didy hitsivolana any amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni) mba hahafahana manarina ireo lesoka samihafa hita tamin’ny lisi-pifidianana.
Nohazavain-dRakotondrazaka Fano, mpampakatenin’ny Ceni fa “didy hahafahana mamerina amin’ny laoniny ny anaran’ireo mpifidy niova biraom-pifidianana no hatao, fa tsy fampidirana anaran’olona vaovao na fanesorana anarana akory. Hoferana ho fitonjato isaky ny biraom-pifidianana hatrany ny isan’ny mpifidy. Mba hahafahana mampahafantatra an’ireo olom-pirenena manan-jo hifidy hoe aiza izy no tokony handatsa-bato amin’ny fifidianana eny anivon’ny kaominina, dia ilaina ny fanatsarana ny lisitra. Tsy afaka hiroso amin’izany dingana izany anefa ny Ceni, raha tsy mahazo fahazoan-dalana amin’ny alalan’ny didy hitsivolana avy any amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany” , hoy izy.
Tsiahivina fa amin’ny 1 desambra ho avy izao ka hatramin’ny 15 mey 2020 no fe-potoana ara-dalàna hisokafan’ny lisi-pifidianana ka mandritra ireo andro ireo indray vao afaka manoratra ny anarany ao anaty lisitra ireo olom-pirenena feno 18 taona.
Fanohizan-draharaha eny amin’ny kaominina :: Mety ireo lefiny no handray ny toeran’ireo Ben’ny tanàna
Ticad andiany faha 7